किन पर्छ हरेक महिलाले गहना वा रत्न लगाउनु ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण.पुराहेर्न फोटो मा किलिक गर्नु .पुराहेर्न फोटो मा किलिक गर्नु . – live 60media
किन पर्छ हरेक महिलाले गहना वा रत्न लगाउनु ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण.पुराहेर्न फोटो मा किलिक गर्नु .पुराहेर्न फोटो मा किलिक गर्नु .
एजेन्सी । भनिन्छ महिलालाई गहनामा विषेश लगाव हुन्छ। त्यसैले महिलाले हिरा, होस् या सुन, चाँदीका गहना, लगाउँदै आएका छन्। तर हिन्दु संस्कारमा विवाहित महिलाले गहना लगाउनु पर्ने परम्परा समेत छ।विवाह होस् वा अन्य कुनै शुभ कार्य, विवाहित महिला गरगहना र सृगारमा सजिएको शुभ मानिने गरिन्छ।
धार्मीक परम्परा अनुसार महिलाले गहना लगाउनु सृगारसँग जोडिएको छ । त्यति मात्र हैन गहना लगाउनु वैज्ञानिक कारण पनि छ। रत्न वा गहला लगाउदा त्यसको प्रभाव शरीरमा पर्ने र त्यसबाट कयौँ स्वास्थ्य लाभ समेत हुने बुझिन्छ। गहना र रत्नका कारण शरीरमा पर्ने प्रभावका बारेमा कयौँ अनुसन्धान समेत भएका छन्। अनुसन्धानबाट गहनाले छालामा गर्ने स्पर्शले शरीरमा राम्रो प्रभाव पर्छ।चाँदीका गहना
चाँदीका गहना लगाउँदा चाँदीको गुण रगतसम्म पुग्ने गर्दछ। जसबाट उच्च रक्तचापको समस्या कम हुने गर्दछ। त्यस्तै हाम्रो हड्डी समेत मजबुत हुने गर्दछ र शरीरका दुखाई कम हुँदै जाने गर्दछन्।
सुनको गहना लगाउदा जवान बनाउन मद्दत पुग्दछ। यसले बढ्दै गएको उमेरको असर कम गर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। सुनमा एन्टी इंफ्लामेन्ट्री गुण हुने गर्दछ। जसले शरीरको रुप रंगमा निखार ल्याउन सहयोग पुर्याउछ।
तामामा यस्तो प्रकारण शक्ति हुन्छ जसको गहना लगाउदा जार्ने दुख्ने समस्या कम हुने गर्दछमोतीको गहनामोतीको गहना लगाउदा उच्च रक्तचापको समस्या कम हुन्छ। मोतीले मानिसलाई भावनात्मक सन्तुलन राख्न सहयोग पुर्यादछ र शान्त राख्न मद्दत गर्दछ। जसका कारण उच्च रक्तचापको समस्याबाट टाढा रहन सहयोगपुग्दछ।इन्टरनेटखबरडटकम।।
← विवाह गर्छु’ भनेर प्रेमीले बोलाएर गएकी १४ वर्षकी बालिकालाई ५ जना साथी लगाएर बे’हो’स पार्दै… (भिडियो हेर्नुस्)पुराहेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला
गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन !.पुराहेर्न फोटो मा किलिक गर्नु →